ट्विंकलले खोलिन् राज – शाहरुख, सलमान र आमिरको भन्दा… ! – Sawal Nepal
ट्विंकलले खोलिन् राज – शाहरुख, सलमान र आमिरको भन्दा… !
Agency Thursday, May 21, 2020
एजेन्सी । बलिउडका दुई सुपरस्टार राजेश खन्ना–डिम्पल कपाडियाकी छोरी एवं अक्षय कुमारकी श्रीमती ट्विंकल खन्ना । नायिका हुनुका साथै लेखिका र स्तम्भकार हुन् ।
निकै कमलाई थाहा होला कि ट्विंकल खन्नाको आँखालाई क्रस आई (डेढो) थियो । सन् १९९५ मा रिलिज भएका केही फिल्ममा उनको आँखामा यस्तो समस्या स्पष्ट देखिन्थ्यो तर केही फिल्म सफल भएपछि उनले यसको उपचार श-ल्यक्रियामार्फत गराइन् ।
इन्टिमेट सीन गर्दा सनी लियोनीलाई त्यतिबेला रिस उठ्छ जब…